धेरै सानो बालकनी सजाउन फर्नीचर तह | बेजिया
मारिया vazquez | 07/01/2022 18:00 | ट्रिक्स सजावट
कैदको समयमा, हामी मध्ये जो हाम्रो घरमा बाहिरी ठाउँको मजा लिन सक्छौं धेरै भाग्यशाली महसुस गर्यौं। यहाँ सम्म कि धेरै सानो बालकनी तिनीहरू सानो खजाना भए। र त्यो संग छ तह फर्निचर यी घरको विस्तार हुन सक्छ।
घरका बालकनीहरू तिनीहरू सामान्यतया साना हुन्छन् तर तिनीहरूको फाइदा लिनको लागि त्यो बाधा होइन। के तपाईं गर्मीको समयमा बिहान कफी पिउनु भएको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? साँझ बसेर पढ्ने ? आफ्नो पार्टनरसँग डिनरको मजा लिदै हुनुहुन्छ? तपाईं फर्निचरका केही टुक्राहरू राखेर यो गर्न सक्नुहुन्छ।
1 फोल्डिंग फर्नीचर
3 तिनीहरूलाई सँगै मिलाउनुहोस् ...
धेरै सानो बालकनीहरू सजाउनको लागि फोल्डिंग फर्नीचर एक उत्कृष्ट विकल्प हो। यी मात्र होइन, सामान्यतया, प्रकाश, तर पनि हामीलाई अनुमति दिन्छ सजिलैसँग ठाउँ पुन: कन्फिगर गर्नुहोस् जब आवश्यक हुन्छ। फोल्ड गरिएको तिनीहरूले धेरै थोरै ठाउँ लिन्छन्, जसले तपाईंलाई अर्को तरिकामा ठाउँ प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ। तर यी यस प्रकारको फर्नीचरको मात्र फाइदाहरू होइनन् जुन तपाईले तल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
तिनीहरू हल्का फर्नीचर हुन्; तिनीहरू थोरै तौल्छन् र नेत्रहीन रूपमा थोरै ठाउँ लिन्छन्।
फोल्ड र सङ्कलन गर्न सकिन्छ सजिलैसँग जब हामीले ठाउँलाई अर्को तरिकामा प्रयोग गर्न वा जाडोको लागि यसलाई तयार गर्न आवश्यक छ।
तिनीहरू अपेक्षाकृत सस्तो छन्.
बालकनीमा कुन फोल्डिङ फर्निचर आवश्यक छ? प्रत्येक व्यक्ति वा प्रत्येक परिवारको आवश्यकता फरक-फरक हुन्छ, तर त्यहाँ फर्निचरका दुई टुक्राहरू छन् जुन बालकनीको बाटोमा विरलै आउँछन् किनभने तिनीहरूले यसलाई थप कार्यात्मक ठाउँ बनाउँछन्। हामी पक्कै पनि कुरा गर्छौं टेबल र कुर्सीहरू।
una गोल फोल्डिंग टेबल यो सधैं स्वागत योग्य थप हो। र... कम्तिमा दुईवटा कुर्सी नभएको टेबुल राख्नु के अर्थ हुन्छ? यस प्रकारको सेटले तपाईंलाई विदेशमा धेरै गतिविधिहरू गर्न अनुमति दिन्छ: कफी खानुहोस्, खानुहोस्, पढ्नुहोस्, काम गर्नुहोस् ... र अरू कसैसँग गर्नुहोस्।
के तपाईसँग धेरै थोरै ठाउँ छ? एक मा शर्त अर्धवृत्ताकार तालिका कि तपाइँ रेलिङ वा भित्तामा जोड्न सक्नुहुन्छ र कुर्सीहरूलाई बालकनीको छेउमा बेन्चसँग बदल्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सायद दुईवटा कुर्सीहरू फिट गर्नुहुन्न तर दुई व्यक्तिहरू समायोजन गर्न सक्ने बेन्च। के तपाईं आयताकार तालिका राख्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईंको बालकनीको ठाउँले यसलाई अनुमति दिन्छ र बाहिर खान र खाना खान सक्षम हुनु तपाईंको लागि प्राथमिकता हो भने, नहिचकिचाउनुहोस्!
बाहिरी ठाउँका लागि उपयुक्त सामग्रीबाट बनेको टेबल र कुर्सीहरूमा बाजी लगाउनुहोस्। राम्रोसँग समर्थन गर्ने सामग्री प्रतिकूल मौसम जस्तै स्टिल, सिंथेटिक फाइबर वा उष्णकटिबंधीय काठ जस्तै सागौन।
तिनीहरूलाई सँगै मिलाउनुहोस् ...
Un workbench वा भण्डारण संग छुट तिनीहरू बालकनीमा कहिल्यै धेरै हुँदैनन्। बेन्चहरूमा तपाईंले यो जस्तै ठाउँ ओगटेको कुर्सीहरूमा तपाईं भन्दा धेरै मानिसहरू बस्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ यसलाई भित्तामा जोड्नुहुन्छ र केहि म्याटहरू राख्नुहुन्छ भने तपाइँ दिनको कुनै पनि समयमा आराम गर्न सक्नुहुन्छ।
सुत्ने र आराम गर्ने ठाउँ पाउनु तपाईको प्राथमिकता हो? त्यसोभए तपाईले सोफा राख्न रुचाउनु हुन्छ र यदि तपाईसँग टोफोको लागि ठाउँ छैन भने टेबल र कुर्सीहरू बिर्सनुहोस्। कुनाको सोफामा बाजी लगाउनुहोस् र सेट पूरा गर्नुहोस् एक तह कफी टेबल। यसले तपाईंलाई कफी पिउन वा हल्का खाजाको खानाको सेवा दिनेछ।
के तपाईं ठाउँलाई थप स्वागतयोग्य बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि तपाईंलाई आफ्नो बालकनीको भुइँ मनपर्दैन वा यो खराब अवस्थामा छ भने, किन समावेश नगर्ने? ढाँचा प्लेटफार्म? तिनीहरू राख्न धेरै सजिलो छन्; केही सरल क्लिकहरू। र यदि तपाईंको बालकनी धेरै सानो छ भने, लागत बढ्नेछैन। तिनीहरूको मूल्य प्रति वर्ग मीटर € 16 र € 23 बीचमा छ। साथै कपडाले तपाईंलाई न्यानोपनमा मद्दत गर्नेछ।
र नबिर्सनुहोस् केही बिरुवाहरू समावेश गर्नुहोस्। यसले बालकनीमा ताजगी र रंग ल्याउँछ। र, तपाईंले कुन बिरुवाहरू छान्नुहुन्छ र तपाईंले तिनीहरूलाई कहाँ राख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ, तिनीहरूले तपाईंलाई अझ बढी गोपनीयता प्रदान गर्न सक्छन्। कम मर्मतसम्भार नमूनाहरूमा शर्त लगाउनुहोस् जुन वर्षभर बाहिर रहन सक्छ र जसको आकार ठूलो छैन ताकि तिनीहरूले धेरै ठाउँ चोर्दैनन्।
फोल्डिंग फर्निचरको साथ धेरै सानो बालकनीहरू सजाउनु धेरै सरल र सस्तो छ। केहि हेर्नुहोस् र सकेसम्म चाँडो यसको फाइदा लिन सुरु गर्न वसन्त आउनु अघि आफ्नो बालकनी तयार गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » ट्रिक्स सजावट » धेरै सानो बालकनीहरू सजाउनको लागि फोल्डिंग फर्नीचर
टाउको दुखाइ उपचार गर्न4प्राकृतिक उपचार